XIKOO niile anyị ikuku oyi ngwaahịa onwe haziri na mepụtara na onwe ha ikike arịa amamihe. Anyị nwere ike ịnye ọrụ nhazi OEM dị ka ndị ahịa si mba na mpaghara dị iche iche si chọọ, OEM dị ka: agba ọdịdị ọdịdị, ọrụ ngwaahịa ele mmadụ anya n'ihu, voltaji, ugboro ole, nkwụnye, ngwugwu ngwaahịa na ihe ndị ahịa ndị ọzọ chọrọ, ndị otu anyị ga-enye gị ọrụ OEM n'eziokwu. .
XIKOO nwere ike na-akwado nnukwu ika maka ebu imewe, mmepe, ebu ọgwụ nhazi, na zuru ezu evaporative ikuku oyi mmepụta na ngwa na-akwado ọrụ, ebu nkekọrịta, ngwa nkekọrịta, na ọkọlọtọ nkekọrịta na-enye ODM ọrụ ahịa gburugburu ụwa.
Ebu mmepe ike
Anyị ụlọ ọrụ nwere ike inye 3D Eserese na ebu Ọdịdị Eserese na 7 ụbọchị isi na sample ma ọ bụ imewe Eserese si ahịa, enwezu ebu mmepụta na ikpe ikpe ebu na 45 ụbọchị, na-anapụta ebu maka injections na 50 ụbọchị.
Ọgwụ nhazi ikike
2 tent nke 2,200 tọn ọgwụ ịkpụzi igwe na 2 tent nke 1,800 tọn ọgwụ ịkpụzi igwe, anyị na-enye dechara ọrụ site na ngwaahịa mmepe, imewe, ebu oghere, Ọgwụ na ịkpụzi, na nzukọ.
Ike imepụta igwe
XIKOO akpaghị aka mmepụta akara na zuru igwe mgbakọ ogbako, ihe karịrị 50 ọkà mkpara mkpara, na kwa afọ 50,000 tent nke zuru ezu igwe na SKD.
XIKOO nwere igwe nyocha otutu, nyocha nke oma, nweta ikike iri na abuo iri na ato, wee gafee asambodo 3C, asambodo EU, na asambodo Middle East SASO, ma gosiputa onodu ahia.
Mbupu Nkwakọ ngwaahịa
OEM / ODM kwadoro ndị ahịa